साताको मुहार/ब्रेन एन्ड ब्युटी
असोज २७, २०७५ शनिवार १४:२०:२३
कक्षा १ देखि १० सम्म स्कुल टपर डा. सुनिता धन्छा सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिकी थिइन्। स्कुले जीवनदेखि नै डाक्टर बन्ने सपना देखेकी सुनितालाई नृत्य, गायन, कविता तथा निबन्ध लेखनका साथै समाजसेवामा पनि रुचि छ। नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगबाट एमबिबिएस पूरा गरेकी सुनिताले त्यह...
असोज ६, २०७५ शनिवार ०९:००:००
काठमाडौंको पेप्सीकोला स्थायी घर भएकी सोनिका शाह हाल नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत छिन् । सानैदेखि पढाइमा अब्बल सोनिकाको सपना थियो, डाक्टर बन्ने । लिटल एन्जल्सबाट प्लस टु गरेकी उनले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजबाटै एमबिबिएस सकेर आफ्नो सपना साकार पारिन् । उनलाई एनेस्थेसियाम...
भदौ २, २०७५ शनिवार ०८:००:००
कुसुम पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा एमबिबिएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छिन्। काठमाडौं बसुन्धरा निवासी पौडेललाई अभिभावकले बाल्यकालमा बिरामी पर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने गर्थे। अस्पतालमा डाक्टरहरुले गरेको व्यवहार र सबैले डा...
ब्रेन एन्ड ब्युटी: डा मेनम कटवाल
साउन २६, २०७५ शनिवार ०८:००:००
मदरल्यान्ड अस्पताल र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा कार्यरत डा मेनम कटवाल काठमाडौंको पेप्सीकोला बस्छिन्। फुर्सदको समयमा उनलाई घुम्न, गीत सुन्न र नाच्न एकदमै मन पर्छ। हालैमात्र उनी अस्ट्रेलिया भ्रमण सकेर फर्किइन्। नागार्जुन एकडेमीबाट एसएलसी पास गरेकी मेनमले युनाइटेड एकडेमीबाट...
असार २, २०७५ शनिवार १४:४२:५२
डा अस्मिता अर्यालले काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट हालै एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेकी हुन् । इन्टर्नसिप गरिरहेकी डा अर्यालले काठमाडौंको भिएस निकेतनबाट एसएलसी र सेन्ट जेभियर्सबाट १२ कक्षाको अध्ययन पूरा गरेकी हुन् । चिकित्सा क्षेत्रबाहेक उनको रुची कविता लेखनमा पनि छ । नेपाली र अं...
जेठ ५, २०७५ शनिवार १४:१८:५०
नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसबाट भर्खरै एमबिबिएसको पढाइ पूरा गरेर इन्टर्न गरिरहेकी छिन्, ईशु श्रेष्ठ । द न्यु समिट स्कुल मैतिदेवीबाट विद्यालय शिक्षा र सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट आइएससी अध्ययन गरेकी उनको लक्ष्य डाक्टर बन्ने थियो । उनको रुचि नाचगान र खेलमा पनि ...
बैशाख १८, २०७५ मगलवार १५:०७:३२
डा आस्था दवाडीले भर्खरै एमबिबिएस सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेकी छन्। उनले बंगलादेशको जैनुल हक सिक्दर वुमेन्स मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी हुन्। ब्राइट फ्युचर सेकेन्डरी स्कुल नैकापबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी आस्थाले युनाइटेड एकेडेमीबाट उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा लिएकी हुन्। पढ...
चैत ३, २०७४ शनिवार १९:०६:००
बृहस्पति विद्या सदन काठमाडौंबाट एसएलसी पास गरेकी डा सुप्रिया सापकोटाले नेसनल क्याम्पस काठमाडौंबाट प्लस टु पूरा गरेकी हुन् । किष्ट मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी उनी पछिल्लो समय विभिन्न अनुसन्धानमा व्यस्त छिन् । अध्ययन र खोजमा रुची राख्ने उनका तीन वटा अनुसन्धानमूलक लेख व...
माघ २०, २०७४ शनिवार १९:३७:१९
अंकिता अग्रवाल नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसको कलेज अफ मेडिसिनमा एमबिबिएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छिन्। उनले गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेकी हुन्। अध्ययनका साथै समाजसेवामा समेत रुची राख्ने अंकिता लायन्स क्लब, गान्धी इन्टरन...
पुस २२, २०७४ शनिवार २१:२८:००
जापानको सेन्डाइ सहरमा जन्मेकी डा रिका रिजाल काठमाडौंमा हुर्केकी हुन् । विद्यालयस्तरको पढाइ डिएभी स्कुल ललितपुरबाट पूरा गरेकी उनले उच्च माध्यामिक शिक्षा प्रसादी एकेडेमी, ललितपुरबाट हासिल गरिन्। काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी डा रिजाल सोही कलेजको मेडिकल ए...
पुस १, २०७४ शनिवार १२:४४:००
ढाका युनिर्भसिटीबाट एमबिबिएस गरेकी डा अनिता रौनियारको स्थायी घर वीरगञ्ज हो। अहिले उनी भक्तपुरस्थि नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालमा कार्यरत छिन्। वीरगञ्जको व्यावसायिक घरानामा जन्मिएकी डा अनिताको गाइनोमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने योजना छ। नेपालमा रहेका गाइनोका डाक्टरहर...
कात्तिक १९, २०७४ आइतवार १४:१४:००
काठमाडौं नयाँबानेश्वर निवासी डा सह्राना उप्रेती यतिबेला विशेषज्ञ तह अध्ययनका लागि तयारीमा जुटेकी छिन् । काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस उत्र्तीण उप्रेती मेडिसिनमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने योजानमा छिन् । उनले आफ्नो विद्यालय शिक्षा सेन्ट मेरिज स्कुलबाट गरेकी हुन् । अध्ययनसँ...
असोज २१, २०७४ शनिवार १७:२२:००
काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलबाट एमबिबिएस गरेकी डा निदृत बोहरा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन् । सेन्ट मेरिज स्कुल पोखराबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेकी उनले प्लस टु भने काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट पूरा गरिन् । उनी च...
साउन २८, २०७४ शनिवार १८:५८:००
सरिशा श्रेष्ठ किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । सेन्ट जेभियर्समा माध्यमिक र सेन्ट मेरिजमा उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेकी उनको बाल्यकालमा कम्प्युटर इञ्जिनियर बन्ने रुचि थियो । तर, कक्षा ९ मा पढ्दा मिल्ने साथीकी आमा बिरामी भएपछि उनको लक्ष्य मोडियो ।&n...
ब्रेन एन्ड ब्युटीः डा. अञ्जना थापा मगर
असार २४, २०७४ शनिवार २०:३५:००
काठमाडौँ तीनथानाकी डा. अञ्जना हाल काठमाडौँ मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छिन् । अस्पतालको मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा मेडिकल अफिसरका रुपमा कार्यरत डा. अञ्जना डर्माटोलोजिस्ट विशेषज्ञ बन्ने योजनामा छिन् । उनले काठमाडौँ बलम्बूको रोडोडेन्ड्रोन इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलमा वि...
ब्रेन एन्ड ब्युटीः डा. अञ्जना केसी
जेठ २७, २०७४ शनिवार १६:१३:००
डा. अञ्जना केसीले लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी हुन् । बुटवलको क्यानन हायर सेकेन्डेरी स्कुलबाट एसएलसी गरेकी अञ्जनाले तिलत्तोमा उमाविबाट प्लस टु सकेकी हुन् । चिकित्सा अध्ययन पश्चात् एक वर्ष वयोधा अस्पतालमा सेवा दिएकी अञ्जना अहिले विशेषज्ञता अध्ययनका लागि तयारी गर...
डा. शिल्पा सिम्खडा
बैशाख २३, २०७४ शनिवार १४:३६:००
काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी डा. शिल्पा सिम्खडा अहिले गंगालाल हृदय केन्द्रमा कार्यरत छिन् । ज्ञानोदय स्कुलबाट एसएलसी गरेकी शिल्पाले गोल्डेन गेट कलेजबाट प्लस टु पास गरेकी हुन् । इन्टरनल मेडिसिनमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकी शिल्पा त्यसकै तयारीका लागि गंग...
डा. उपमा संग्रौला
चैत १९, २०७३ शनिवार १४:३४:००
ब्रेन एन्ड ब्युटीः काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट एक वर्षअघि मात्रै एमबिबिएस गरेकी डा. उपमा संग्रौला अहिले विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि तयारी गरिरहेकी छिन् । इन्टरनल मेडिसिनमा विशेषज्ञ बन्ने उनको धोको छ । त्यसैले ६ महिना काम गरेर अहिले त्यसैको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेकी...
चैत ३, २०७३ बिहिवार २०:०९:००
साताको मुहार - नर्स रेणुका खड्का बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको नवजात शिशु सघन कक्ष (एनआइसियु)मा कार्यरत छिन। काठमाडौं नयाँ बानेश्वर निवासी खड्काले वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज नर्सिङ क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमणपत्र तह (पिसिएल) अध्ययन गरेकी हुन् । सन् २०१० म...
डा. रश्मी भट्टराई
फागुन २१, २०७३ आइतवार ०१:४४:००
ब्रेन एण्ड ब्यूटी – डा. रश्मी भट्टराई काठमाडौँ चाबहिलको ओम हस्पिटलमा मेडिकल अफिसर्सका रुपमा कार्यरत छिन् । उनले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस पास गरेकी हुन् । विराटनगरको देवकोटा मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी रश्मीले काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्सबाट आइएस्सी ...